Wicitaan Lagu Bixinayo Taageero Laba Jibaaran Oo Loogu Talo Galay Warshadaha T ThroughBİTAK | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWicitaan lagu Bixinayo Taageero Laba Jibaaran Oo Loogu Talo Galay Warshadaha Oo Loogu Talo Galay TÜBİTAK
14 / 05 / 2020 GUUD, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Laba wicitaan oo cusub oo lagu abuurayo isku-xirnaanta warshadaha iyada oo loo marayo tubitak
Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda ayaa diyaarisay laba wicitaan oo cusub oo abuuri doona isku-xirnaanta warshadaha iyada oo loo marayo hay'adda ay khusayso, TUBITAK. Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa ku dhawaaqay baaqyo labanlaab oo lagu taageerayo warshadaha. Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay taageeri doonaan mashaariicda wadajirka ah ee u baahan iskaashiga ka dhanka ah wicitaanada "Order R&D" iyo "Liisanka Patent", ayuu Wasiir Varank yiri, "Waxaan taageeri doonnaa badeecad cusub oo leh awood ganacsi sarre leh Amarka R&D. Wicitaankeena liisanka rukhsadda, waxaan ku soo qaadaneynaa shatiyadaha ay leeyihiin shirkadaha soosaara teknolojiyada warshadaha. Marka la eego baaqa labadan wicitaan, waxaan abuuri doonnaa mashruuc 60 milyan oo lira ah. ayaa yidhi.
FADLAN KU SAABSAN DHAQANKA
Turkiga, dhinaca kale inta uu sii wado halganka uu la jiro Covidien-19 oo xawaare buuxa ku socda, isagoo sidoo kale sameynaya daraasado si dhaqaalaha loogu soo celiyo orod buuxa. Wasaaradda Wershadaha iyo Teknolojiyadda ayaa sii wadaysa inay gacan siiso gaar ahaan ururada warshadaha ee hawshan ku jira, halkaas oo lagu soo bandhigo qiyaaso cusub maalin kasta. Wasaaraddu waxay ugu dambeyntii ugu talagashay inay gacan ka geysato warshadaha iyaga oo diyaarinaya laba wicitaan oo cusub.
AMARKA R&D CALL
Wicitaankii ugu horreeyay ee uu shaaciyay Wasiir Varank waxaa la yiraahdaa Wicitaanka Taageerada ee SME ee Mashaariicda R&D ku saleysan. Baaxadda wicitaan ahaan, waxaa loogu talagalay in lagu taageero mashaariicda R&D ee sida dhaqsaha leh isu beddeli kara badeecada isla markaana leh awood sare oo ganacsi. Çağrı wuxuu dhiiri galiyaa SMEs inay soo saaraan alaabo wax soo saar leh oo lagu horumarin doono R&D oo diyaar u ah macaamiisha mustaqbalka, iyagoo ah mashruuc wada jir ah Ururka Macaamiisha. U yeeritaankan, waxaa la rajeynayaa in labadaba iskaashi la kordhiyo iyo ilaha loo qoondeeyo taageerada R&D si hufan ayaa loo adeegsan doonaa.
2 BIL MILLION TL per project
Ugu yaraan hal urur Alaab bixiye ayaa ka codsan kara wicitaanka iyadoo la adeegsanaayo Hay'adda Macaamiisha iyo qiyaasta SME. Miisaaniyadda halkii mashruuc waxay noqon doontaa ilaa 2 milyan iyo bar milyan TL wicitaanka, halkaas oo mashaariicda R&D ee leh karti sare oo ganacsi laga taageeri karo dhammaan waaxaha iyo dhammaan aaggyada tikniyoolajiyada. Mashaariicda waxay ka koobnaan doonaan labo marxaladood: wax soo saarka / hanaanka waxsoosaarka iyo ganacsiga. Marxaladda koowaad waxay noqon doontaa ugu badnaan 24 bilood, marxaladda labaadna waxay noqon doontaa 24 bilood oo go'an.
WACLAHA LACAG LA'AAN EE XARUNTA
Wicitaanka labaad, oo uu ku dhawaaqay Wasiirka Varank, waxaa loogu yeeraa Wicitaanka Taageerada Kala-wareejinta Teknolojiyadda Patent-ku-saleysan. Magaca gaaban ee jaamacadaha leh wicitaanka Liisanka Mashiinka ah, kaas oo looga golleeyahay hirgelinta warshadaha soo saaray iyo tikniyoolajiyadda tikniyoolajiyada ama xarumaha cilmi baarista tikniyoolajiyada ee gobolka.
Yeedhka, jaamacadaha, kaabayaasha cilmi baarista, shirkadaha tikniyoolajiyadda horumarinta tikniyoolajiyada iyo xafiisyada wareejinta teknolojiyadda waxaa lagu qeexay "Hay'adaha Bixiyaasha Teknolojiyada". Shirkadaha ka heli doona rukhsadaha ay leeyihiin Hay'adda Bixiyaha Teknolojiyada iyada oo loo marayo laysan ama wareejin ayaa lagu tilmaamay Machadyada Macaamiisha. Wicitaanada, oo ay la leeyihiin hal macmiil ugu yaraan hal urur ayaa codsanaya Teknolojiyada Bixiyeyaasha oo si wadajir ah ururka loo aqbalayaa.
KA SOO SAARID TUUGTA SII SAMEE
Mashaariicda waxaa la taageeri doonaa ilaa 60 bilood. Haddii ururka macmiilka uu yahay SME, 15 boqolkiiba ayaa lagu dari doonaa heerka taageerada. Miisaaniyadda illaa hal milyan oo lira ayaa loo qoondeeyey mashruuc kasta.
Wasiir Varank, 19 TUBITAK TvidITen Covidien Platform oo ay soo qaban qaabisay Awoodda Baadhista ee Turkiga kadib markii laga hadlay labada wicitaan ee cusub khudbadiisa shirka ayuu yidhi:
XEERKA LACAGTA: Midka koowaad waa Wicitaanka Taageerada ee SME ee loogu talagalay Mashaariicda R&D ee Mashaariicda ku saleysan. Halkan, ugu yaraan hal urur alaab-qeybiye iyo hal Macaamiil Xawaare ah oo ku jira cabbirka SME - tani sidoo kale waxay noqon kartaa urur ballaaran - waa inay si wada jir ah u codsadaan. Ma lihin wax maaddo iyo xadidnaan qaybaha ah. In kasta oo SMEs ay horumarinayaan sheyga iyaga oo sameeya R&D, Ururka Macaamiisha ayaa taageeri doona fulinta mashruuca R&D sidii loogu talagalay. Markaa, macluumaadka waa la wadaagi doonaa, faafin doonaa oo dhakhso ayaa loogu beddelayaa shey. Mashaariicda diiradda saaraya R&D, habka iskaashiga ayaa dardar galin doona dhaqanka iskaashiguna wuxuu noqon doonaa mid baahsan.
DHEXDHEXAADINTA WAA DHAQAN: Wicitaankeena labaad waa Taageerida Beddelka Teknolojiyadda Patent-ku-saleysan. Waxaa jira teknolojiyad la aqoonsan yahay oo laga soo saaray jaamacadaha, kaabayaasha baarista iyo shirkadaha Technarkark. Wicitaankeena ayaa ujeedadeedu tahay in lagu wareejiyo tikniyoolajiyadda la xareysto warshadaha. Xiriirka ka dhexeeya ururada soosaara teknolojiyada iyo macaamiishooda ayaa sii kordhayo iyo iibsashada adeegga waa la taageeri doonaa. Qaranka ama tikniyoolajiyadda ay ilaalinayaan rukhsadaha caalamiga ahi, u rogaan qiimo dhaqaale in lagu gaadho iyada oo la marayo shati bixinta ama wareejinta.
Mashruucyada R & D
Mashaariicda R&D ee Ku-Meelgaarka ah
38 Milyan oo Turkish Liras ah ayaa la hibeeyay
Dhibaataynta Muwaadinka, Shaqadiisa ayaa la xaliyay